HAADHA ORMAA-Yeeyyis Birruu Nagaroo – Beekan Guluma Erena
HAADHA ORMAA-Yeeyyis Birruu Nagaroo	Beekan Erena
Poems June 19, 2016June 19, 2016
Jiituu dhagaa taate
Gogaa tuullaa cabbii
Akka ameessa baakkuu
Ishee hinqabne jabbii,
Seenaa harmee kaafte
Garuu nan amantuu,
Godduu dhiiga hinbuufnee
Lafee dhuka hinqabnee,
Naaf gaddee hinmiixatuu,
Haadhatti naaf waamu
Bofa marga keessaa,
Akka ilmoo illeessaa,
Dhalakoo naan jettee
Na duuba deebitee
Bishaanni utuu jiruu
Yoon corroqa dhuguu,
Siren utuu jiruu
Yommuun taa’ee muguu,
Boolla meeqa seenee
Asiifi achi kaadhee,
Baa’aa dhaala hinqabne
Isheef dhangaa kenneen
Ofii qorsoo nyaadhe.
Utuu coomni jiruu
Utuun haadha qabuu
Har’a lafa rafee
Ormaaf siree hafe.
Ciiniifi geergoo dhalashee
Fuudhee mataatti baadhee
Coomni utuma waadamuu
Maxinoofi giixxaa nyaadhee,
Hiixannaa harmeekoo durii
Yeroo sanan yaadadhe.
Kan mana haxaa’u
Haxaa’ee inni miicu
Miicee inni gogsu,
Kan garaatti baatu
Baatee inni dhoksu,
Kan loon mooraa yaasee
Tiksee fuudhee galu
Hurraas inni baatu,
Utuu mana jiruu
Kan mimmixaan nyaatu,
Kan nama raffisee
Nama booda rafuuf
Cinaacha gad qabu,
Yaasa saree dursee
Nama dura ka’uuf
Kan mataa olqabu,
Garaan waaqaa keessi
Natti utuu minyaa’uu
Kan buna danfisee
Hirribaa ishee kaasu,
Siree ishee jalaa
Inni ‘pooppoo’ fuudhee
Kan akkas na dhamasu.
Mul’ata ofii dhabuunkoo
Gola harmeekoo na butee,
Haadhakoof diina godhee
Dhaqe haadha ormaaf dute.
Afaan guutee akka hinnyaanneef
Luugamaan na takaaltee,
Harmeef akka hindubbanne
Abdaareen na abaartee,
Qalbii dhabee taa’uunkoo
Si haa maaruunshee oolmaadhaa,
Si haa maaruunis ni hafee
Dabareen haadha ormaadha.
Waanjoodhafi giindii baadhee,
Bajjiis tarsaasee qotee
Ofii akaa’ii nyaadhee,
Booraafi leencaa leejjisee
Qaccee irratti tokkaasee,
Waanjoos qoleerraa fuudhee
Kalootti achi bobbaasee,
Ofkalaa ittiin jedhee
Hoofees bishan obaasee,
Akkasitti aarsaa ta’een
Dilbii manashee baase.
Naa gameetii na ga’aa
Harmeekoo naaf barbaadaa,
Golli dhiigaafi dhuknikoo
Hidda sanyiikoo yaada,
Ormis dheedhiikoo argee
Narraa nyaachuuf na gaada,
Qalbii dhabuukoo duriif
Yaa indaaqqoo naaf iyyii
Yaa weennii naaf korrisii
Lafti naaf haa bari’uu,
Yaa baatii guyyaa ta’ii
Yaa waggaa torbee ta’i
Barri naaf haa waari’uu,
Yaa waaqaa naaf dubbadhu
Dhiigni dhiiga jaallatee
Diinni wal haa hari’uu!!
Yeeyyis Birruu Nagaroo
OBSI YAA GARAAKO!!!
Obsi yaa garaako, Maaliif obsa dhabda?
Utuma argituu ijoollummaan cabdaa?
Maaf yaada baayyiftee mar’ummaan ofgubda?
Akka madaa qubaa maaf akkas of hubda?
Lakki harree ta’ii waan argite baadhu
Dogna hinta’nii lammiikeetiif laadhu
Akka saree ta’ii lafaa fuudhii nyaadhu
Borkee yoos qaqqabdaa mee garaa balladhu
… ….malee tabuu hinta’in
………yeroo malee hinba’in
………waca hormaa hin na’in!!
Ani maalin godhe mal sittan balleesse?
Atis akka gurraa holola dhageessee,
Imaanaa callaakoo naaf bulleessuu
diddee martee irrateessee?
Dheebuukeefi beelakee naaf jettee dandeessee,
Bututa caba…koos baattee asiin geessee,
Waan hedduu obsitee har’a maaf dadhabde?
Atis akka hormaa guungumuu jalqabdeeeee?
Anoo si duuballee wanta tokko hinnyaannee
Mareekeen alatti beelaafi dheebuu hin yaadnee
Si wajjinan joora si wajjinan kaadhaa
Wanti harki fides si wajjinan nyaadhaa,
Si’umaafin kenna wanti harki fidu
Yoo ta’ellee si’i kan quufee na diduu!
Dugdakoottoo dibee atoo hindaalachoofnee
Ati dheebuun bultee an dhugee hin machoofnee,
Loon mooraadhaa yaaseen harree tiksee galchaa
Ilma argadha se’een mucaa bulguu dhalchaa!!!
Maaltaate garako duroo kana hinbeektuu,
Bokoktus shuntuurtus natti bade hinjettuu,
Akaa’ii ta’ullee caccabsitee daaktaa,
Maxinoodhaafi giixxaa yoo ta’ellee hin nyaattaa,
Hadhaa’us minyaa’us beekaa waliin maktaa,
Har’a maaltu taanaan naaf obsuu dadhabdee
Mana murtii dhaqxaaaaa?
Maaliif na lafaftaaaa?
HARKA HAADHA HORMAATI!!! Farrakoo farristee ilaameef duuduunkee Kankoo bobbaan qabdee gurraa-aalee muuduunkee
Reef bulee naa gale aannan dhimbiibbattee dhamaan na sooruunkee
Anaaf yoom naa gale daangaakoo boccoquuf sussukaan jooruunkee
Ofii nyaattee dhugdee afaan na dibuunkee An gowwummaaf mitii waa na sarbee malee Utuun wirriiqqadhuu jaarsummaatu dhufee naaf si gidduu galee
Kunis naaf hintaane sumaaf karaa banee Kankee utuun raajuu dhallikoo na gane
Kolfaa sessequunkee madaakoo citteessee Hir’ina dhiigakoof cimina fakkeessee gogaakoo dhiitessee Ofkeessakoo beekaa bututaan buluukoo Qumbii manaa dhabee dikeen of huluunkoo Ofkeessatti guungumaa hasaasaan bo’uunkoo
Hidhaakoo gototee godoodee ho’uunkoo
Anaaf gidirfama gaadii hinfurgaafamnee
Kan hundumtuu arguu Tasa hinhukkaamfamnee
Kana baadheen jooraa quufa qeerroo irratti naaf caba mormaatii,
Nyaadhee beela hinba’u dhangaankoo kan ta’ee harka haadha hormaati !
← VEELOOMOO UFFATA AADAATU CAALAATTI CIDHA BAREECHA? -Bilisummaa kumaa’tiin!’Waan Dubbifamuu qabudha!
OKKOTEE HINBILCHAANNE-Fiixaabas Habroo’tiin →